မျက်လုံးကောင်းတာသေချာရဲ့လား???? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » မျက်လုံးကောင်းတာသေချာရဲ့လား????
Posted by Shwe Ei on Jan 24, 2014 in Community & Society, Health & Fitness, Society & Lifestyle | 36 comments
၇၀ရာခိုင်နှုန်းသော အရွယ်ရောက်ပြီးသူတိုင်း မျက်လုံးနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ပြသနာတော့ရှိကြတာပါဘဲ..သတိမထားမိတာကလွဲလို့ပေါ့လေ။
မကြာမကြာပြန်ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ မျက်စိဝေဒနာဟာ ကုသဖို့ခက်ခဲတဲ့ရောဂါအဆင့်ထိဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။
By Markham Heild
အမေရိကန်လူမျိုးတွေဟာ စမတ်ဖုန်း၊ လက်ပ်တော့ပ်၊ ဒါမှမဟုတ် တက်ဘလက် တခုခု အစရှိတဲ့ ကွန်ပျူတာစခရင်လိုပုံစံမျိုးကို တနေ့ ခြောက်နာရီမှကိုးနာရီလောက်ထိ စိုက်ကြည့်နေလေ့ရှိပါတယ်။
အိုက်လိုသာဆိုရင်တော့ “Digital Eye Strain” ဆိုတဲ့ ဝေဒနာတမျိုးခံစားနေကြရတဲ့ ၇၀ရာခိုင်နှုန်းသော အရွယ်ရောက်ပြီးသူ လူတန်းစားထဲမှာ ရှင်လဲတစ်ယောက် အပါအ၀င်ဖြစ်လို့ရပါပြီ။
“Digital Eye Strain” ဆိုတာ မကြာမကြာပြန်ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ မျက်စိဝေဒနာတစ်ခုအဖြစ်ကနေ ကုသဖို့ခက်ခဲတဲ့ မျက်စိဝေဒနာအဆင့်ကို ရောက်သွားနိုင်တဲ့ ရောဂါအခြေအနေတခုဖြစ်ကြောင်း The Vision Council လို့ခေါ်တဲ့ အကျိုးအမြတ်မယူသောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု (Non Profit Organization ) ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
The Vision Council ဆိုတာ အမြင်အာရုံပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို အထောက်အပံ့ပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
“Digital Eye Strain” ဆိုတာ တနေ့တခြား စိုးရိမ်စရာဖြစ်လာနေတဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပြသနာတစ်ခုပါ။ ရှင်တို့ရဲ့မျက်လုံးတွေဟာ ပုံမှန်အားဖြင့် နေရာအတည်တကျသတ်မှတ်ထားတဲ့ အမှတ်အသားတခုကို နာရီပေါင်းများစွာထိုင်ကြည့်နေဖို့ ဖွဲ့စည်းထားတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် စွမ်းအားမြင့် အလင်းရောင် ကိုထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတခုခု နောက်တစ်မျိုးပြောရရင် ပြုပြင်ဖန်တီးထားတဲ့ အပြာရောင် (artificial “blue light” ) လို အလင်းရောင်မျိုးထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတခုခုဆိုရင် ပိုပြီးသတိထားရပါမယ်။
ဆိုတော့ Artificial “blue light” လို ဟာမျိုးနဲ့လိုအပ်တာထက်ပိုပြီး ထိတွေ့ရတဲ့အခါ ၊ နောက်ထပ်ပြောရရင် ငြိမ်နေတဲ့ အမှတ်အသားတစ်ခုပေါ်မှာဘဲ အာရုံစိုက်ဖို့ ရှင့်တနေ့တာရဲ့ လေးပုံသုံးပုံ ဒါမှမဟုတ် တနေ့လုံးနီးပါးကို အသုံးပြုရတဲ့အခါ
မခံမရပ်နိုင်အောင် မျက်လုံးညောင်းမယ် ၊ မျက်သားခြောက်မယ်၊ မျက်လုံးနီမယ်၊ အမြင်အာရုံ ၀ါးတားတားဖြစ်လာမယ် ၊ မျက်လုံးမှာပင်ပန်းတဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရမယ်၊ ခေါင်းကိုက်မယ်၊ အချိန်ခဏလေး အလုပ်လုပ်ရုံနဲ့ ဇက်ကြောတယ်မယ်၊ ပုခုံးကြောနာမယ် လို့ အစီရင်ခံစာမှာဖေါ်ပြပါရှိပါတယ်
(ကွန်ပျူတာကို စိုက်ကြည့်နေတာ ခဏလေးရပ်ပြီး eye strain ဖြစ်တဲ့ဒဏ်ကိုခံနိုင်အောင် yoga eye exercise လေးနဲနဲလုပ်ကြည့်မယ်)
ခု ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ဒုက္ခထဲကတစ်ခုပဲ။
ဆက် ရန် ကို မျှော်နေမယ်နော်
ဟုတ်တယ်။ အခု စိုးရိမ်နေရတဲ့ ဒုက္ခတစ်ရပ်ပါ။ လိုင်းပေါ် သိပ်မတက်နိုင်တာလည်း ဒီအကြောင်းတစ်ခု ပါတယ်။
အရင် CRT monitor နဲ့ ၂ နှစ်နီးပါးလောက်မှာ မျက်မှန် သုံးရလု နီးပါး ဖြစ်နေတုံး LCD/LED monitor တွေ ပေါပေါ များများ ပေါ်လာ တော့ မတပ်ရတော့ ဘူး။ဒါပေမဲ့ ခုတော့ ပြီးခဲ့ တဲ့ တပတ်ကျော်က မျက်မှန်လုပ်ရပြီ။ အနီးမှုန်ပါ ပါဝါကတော့ ၁၀၀ တဲ့။
ဟတ်ကဲ့…သများလဲ နောက်တပိုင်းဆက်တင်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။
အိုက်ဒါ စာရိုက်ရင်း ဇက်ကြောတက်လာလို့ ဂလောက်နဲ့ ရပ်လိုက်ရတာဘာ…ေိေိ
ဒါ့ကြောင့် မမပြာရဲ့ ဆက်ရန်ကို မျှော်နေပါတယ်.
ခိခိ သာမီးပို့စ်က မန်းဂဇက်ကို ၀င်ပီးစာဖတ်မဲ့သူလျော့အောင်
အသက် ၄၀ကျော်လာလို့လားမသိ အဝေးကပါဝါလျော့လာပြီး…
အနီးက မျက်မှန်ချွတ်ပြီးမှ ကြည့်လို့ရတယ်…
အခုဒီပို့စ်ကိုဖတ်ကြည့်တော့… အင်း ဂဇက်ကို ခွင့်တင်ရင် ကောင်းမလား…
မျက်လုံးမကောင်းတော့တာတော့သေချာတယ် :)) .. ပထမဂိမ်းစွဲတော့မျက်မှန်တပ်ရတယ်.. မျက်မှန်မတပ်ချင်လို့ဂိမ်းဖြတ်လို့ သက်သာသွားပြီး… ဒုတိယအကြိမ်ဂိမ်းထပ်စွဲတော့ … မျက်မှန်ပြန်စမ်း..ပါဝါတိုးသွားတယ်.. အမှတ်မရှိ အခုတတိယဂိမ်းစွဲလို့ ၃ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတင်… အခြေအနေမကောင်းတော့ဘူး.. အခုတော့.. အလုပ်အတွက် မျက်စိကိုပြန်မွေးနေရတယ်..
လယ်ဗယ်မတက်မချင်း သဲကြီးမဲကြီးဆော့တာတော့ ကောင်းပါတယ် ..ခိခိ
အနော်ကတော့ ငယ်ငယ်တုန်းက ဂိမ်းသရဲပေါ့ အခုတော့ အင်တာနက် သရဲလေ သို့ပေသိ အနော်က ပန်းခြံထဲမှာပဲ ဝိုင်ဖိုင်သုံးဖြစ်နေလို့လားမသိ မျက်စိကျန်းမာရေးကတော့ တိန်တိန်မြည်ပဲ
မောင်ငေး အထင်နဲ့ ရမ်းပြောတာဖစ်တဲ့အတွက် မွှားပါတယ်…
နောက်တပိုင်း ဆက်ဖတ်ကျိပါ :boss:
ဖတ်ဖြစ်အောင် စောင့်ဖတ်နေပါမည် မမ ချွေအိ ခညင့်
တကယ် အကျိုး ရှိစေတဲ့ ပိုစ့်လေး တင်ပြပေးလို့ ကျေးဇူး အထူးပါ လို့
လိမ်မာလိုက်တဲ့ ဒေါ်ဖွားမေ ယောက်ကျား…
နာ့ လင်းလင်း ကိုတော့ ချစ်သုဝေနောက်ထဲ့ပေးလိုက်ရဘီ :'(
အခုတော့ မျက်မှန်မပါပဲ တီဗွီ၊ကွန်ပျူတာမကြည့်နိုင်တော့ပါဘူး
အိုက်ဒါ digital eye strain ပေါ့ မနန်းရေ…(သများလဲ တူတူဘာဗြဲ)
နောက်တပိုင်းဆက်တင်ပေးမယ့် eye yoga လေ့ကျင့်ခန်းလေး ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ကျိပါအုံး
၁၀ နှစ်​​ကျော်​ ဖန်းသားပြင်​​ရှေ့မျက်​နှာအပ်​ပြီး လုပ်​ငန်းဝင်​ခဲ့တာ အခု​တော့ အတတ်​နိုင်​ဆုံး ​လျော့​နေရတယ်​ ဒီပို့စ်​နဲ့ ကွန်​မန်း​တွေ ဖတ်​မိတာ ပိုဆိုးသွားလားမသိဘူး
ကွန်ပျူတာရှေ့မျက်နှာအပ်ရတာ ဘ၀ဖြစ်နေဘာဘီ ကိုချိုကြီးရေ….
ကိုဖာသာ ဥာဏ်ကူပြီး အန္တရာယ်ဖြစ်တာနည်းစေမဲ့ နည်းလမ်းကိုရှာရမှာဘာ
မမှားပါဝူး ကိုသောင်းရယ်….ဖတ်ရင်း မှတ်ရင်း သဘောပေါက်လာဘာလိမ့်မယ်
ညက်လုံးကတော့ အစကတဲကမကောင်း ဂိုဒေါ့ ပိုဆိုး
မွသဲရဲ့ မျောက်မှန်လေးအတွက် သများ အပတ်တကုတ်
ကြိုးစားရှာဖွေထားတာလေးတွေ ဝေမျှပရဇီ …ဟိ
ဂဇက်မ၀င်လည်း ကွန်ပူတာကတော့ ရှောင်မရပါဘူး.. ခုမှတော့ မထူးပြီ :boss:
ဟုတ်ပါတယ်…မထူးဝူးဆိုပြီး…ပစ်ထားမိမှာစိုးလို့…ကိုယ်တိုင်ရော..တခြားသူတွေရော awareness ဖစ်အောင် တင်ပေးတာဘာခီညော်
Eye Yoga လေးစမ်းကျိဘာ
နာက တော့ မျတ်ရုံးဝါးလာပီဆို ကွမ်းရွှက်ရှာကပ်တော့တာပဲ..
အဲ့ဒါနဲ့ ပြန်ကောင်းတွားရော ..ေိခိ
ကွန်ပျူတာရှေ့ထိုင်ပြီး အချိန်ကြာကြာစာရိုက်ရသူများမှာ၊ မျက်လုံး
ြွကက်သားများအားကုန်ခြင်း၊ အညောင်းမိ၊ ခါးနာခြင်း၊ အရိုးကျီးပေါင်း
တက်ခြင်း၊ လက်ချောင်းများနှင့် လက်ကောက်ဝတ်များနာကျင်ခြင်း စသည့်
ကွန်ပျူတာကို မိနစ် ၂၀ လောက်ကြည့်ပြီးတိုင်း အခြားတစ်နေရာသို့
မျက်နှာမူ၍ ပေ ၂၀ အကွာရှိ ပစ္စည်းတစ်ခုခုထံအကြည့်လွှဲပါ။ ဒီနည်းက
ကွန်ပျူတာကို မိနစ် ၂၀လောက်ကြည့်ပြီးတိုင်း မျက်လုံးအိမ် စိုစွတ်စေ
ဖို့ မျက်တောင် အကြိမ် ၂၀ ခတ်ပေးပါ။ ဒီနည်းက ကွန်ပျူတာစိုက်ကြည့်
ခြင်းကြောင့် မျက်စိခြောက်ခြင်းနှင့် အခြားနောက်ဆက်တွဲ မျက်စိဝေဒနာ
ကွန်ပျူတာခုံမှာ မိနစ် ၂၀ လောက်ထိုင်ပြီးတိုင်း ခြေလှမ်း ၂၀
ထလျှောက်ပေးပါ။ ဒီနည်းက ခြေထောက်နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းမှာ
သွေးများစုပုံမနေတော့ဘဲ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးသို့ သွေးလည်ပတ်မှု ပြန်လည်
အလုပ်ချိန်ပြီးပြီဆိုရင် လက်ကောက်ဝတ်ကို နာရီလက်တံလည်ပတ်
သည့်လားရာအတိုင်း ၁၀ ကြိမ် စက်ဝိုင်းပုံစံလှည့်ပေးပါ။ ပြီးရင် နာရီ
လက်တံပြောင်းပြန် ၁၀ ကြိမ် စက်ဝိုင်းပုံစံလှည့်ပါ။ ဒီနည်းက လက်
ချောင်းလက်ဆစ်များနဲ့ လက်ကောက်ဝတ်နာကျင်ခြင်းကို သက်သာစေပါ
တစ်နေ့တာအတွက် တာဝန်ချိန်ပြီးဆုံးသွားပါက လည်ပင်းကို ငြိမ်ငြိမ်
ထားပြီး ခေါင်းကို ညာဘက်သို့ ၁၀ ကြိမ် ဖြည်းဖြည်းချင်းရွှေ့ပါ။ ပြီးရင်
ဘယ်ဘက်သို့ ၁၀ ကြိမ် ဖြည်းဖြည်းချင်းရွှေ့ပါ။ ပြီးရင် ခေါင်းကို အပေါ်
အောက် ၁၀ ကြိမ် ဖြည်းဖြည်းချင်းရွှေ့ပါ။ ဒီနည်းက ဇက်ကြောတက်ခြင်း၊
လည်ပင်းရိုးဆစ်များညောင်းညာခြင်း စသည့်ဝေဒနာများကို ချက်ချင်း
ခုထိ ဒေါင်ဒေါင်မြည်ဘဲ ..
ခေါင်းတွေ အသေကိုက်လာတတ်တယ် ..
ကွန်ပူတာကို မိနစ်၂၀လောက်ကျိပီးရင် ပေ၂၀အကွာအဝေးကို
စက္ကန့်၂၀လောက်လှမ်းကျိပီး မျက်တောင် အကြိမ်၂၀ခတ်ပီးပါက
တနေ့ ကန်းကြရမည် .. မကန်းခင် ..ကျိချင်တာ ကျိဂျ…
အဝေးကြည့် …အမေနဲ့သမီးအတူတူလမ်းလျှောက်လာရင် အမေမမြင်သမီးသာမြင်၏…။
အနီးကြည့်… ၁၀၀ တန်နဲ့၁၀၀၀၀တန် အတူတူချထားလျှင် ၁၀၀တန်မမြင် ၁၀၀၀၀တန်သာမြင်၏…။
ကောင်းမကောင်း မသိပါ…၏။…၄၀ သာ သူ့ဘာသူ ကျော်သွားပါ၏…မျက်မှန်တက်ရန် အလွန်ပြင်းပါ၏…။
နင်လားနင်လား ဘဲ သွပ် သွပ်